Winston B&B - Igumbi elilodwa - I-Airbnb
Winston B&B - Igumbi elilodwa
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Winston B&B
I-Winston B&B yesimanjemanje neyomkhathi, elungiswe ngokuphelele, itholakala eStratumseind, eyaziwa ngokuphila kwayo kwasebusuku okunempilo.
Uke wavakashela izindawo ezibukwayo ezihlukahlukene, isikhungo esimnandi sase-Eindhoven noma wajabulela ukuphila kwasebusuku okujabulisayo e-Stratumseind eyaziwayo, bese uphetha usuku ngokuhlala ubusuku bonke endaweni yethu yokuhlala enhle.
I-Winston B&B inikeza amagumbi ayisishiyagalolunye asuka kumuntu oyedwa kuya kwabahlanu. Amakamelo atholakala ezitezi eziphakeme futhi afinyeleleka ngezitebhisi. Akukho lift endaweni yokulala. Izinsiza zenhlanzeko ezihlanganyelwe zitholakala emaphasishi aseduze futhi zitholakala kuzo zonke izivakashi.
Enhliziyweni ephithizelayo yase-Eindhoven uzothola iWinston B&B yesimanjemanje nesemkhathini efakwe esakhiweni esiyisikhumbuzo esihle kusukela cishe ngo-1700 futhi etholakala eStratumseind, umgwaqo ongamamitha angama-225 osuka eDommelbrug uye eCatharinakerk futhi owaziwa ngokuphithizela kwawo. impilo yasebusuku. Amabha ahlukahlukene, amakhefi, izindawo zokudlela kanye nezinye izindawo zokuzijabulisa zingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Isikhungo sezitolo sase-Eindhoven siqala eCatharinakerk.
Ibungazwe ngu-Winston B&B
Uma kudingeka singathintwa ngocingo.